Augustina Mahinga: Adoonka Wakiilka Uga Ah Somalia Q/M Oo Faragelin Qaawan Ku Sameeyay Somaliland, Kana Hadlay Xukunka Kooxdii Weerartay Xerada Ciidanka Qaranka – Araweelo News Network (Archive)
Narirobi(ANN)Wakiilka Xoghayaha Qaramada Midooby u qaabilsan Arrimaha Siyaasada ee Somaliland iyo Somalia Augustine P. Mahiga, ayaa muujiyay taageerada uu u hayo falkii kooxda dablayda ahi ku weerareen xerada Ciidanka qaranka Somaliland ee Koonfur bariga magaalada Hargeysa
Talaadadii lasoo dhaafay, taas oo keentay khasaare dhimasho iyo dhaawacba.
Mahinga qoraal uu kaga hadlayo arrintaa oo uu maanta kasoo saaray xafiiskiisa Nairobi , wuxuu ku tilmaamay dhacdadaa mid dagaal ku dhexmaray ciidanka qaranka Somaliland iyo shacbiga, isla markaana uu ka xunayahay khasaaraha ka dhashay ee labada dhinacba soo gaadhay. sidaana wuxuu ku sheegay qoraal kooban oo uu kaga hadlayo arrintaa.
Wakiilka Qaramada Midoobay, wuxuu canbaareeyay xukunka Maxkamadda ciidanka qaranka Somalialnd ku riday 17 ka mid ahaa kooxdaa oo dil lagu xukumay, isagoo Augustine ku baaqay in kiiska xukunka kooxdaa ee Maxkamadda Milateriga loo wareejiyo dhinaca Maxkamaddaha medeniga ah, isla markaana wuxuu si indho la’aan ah u dafiray shuruucda iyo nidaamka dalka Somaliland, isagoo ku sifeeyay xukunka maxkamadda ciidanka qaranka inuu yahay mid aan waafqsanayn shuruucda dalka iyo kuwa caalamiga ah. sidaa awgeed loo baahanyahay maxkamad cadaalad ah oo ay labada dhinacba kalsoon yihiin oo la hubiyo inay tahay mid dhex ah.
Sidoo kale Mahinga, wuxuu qoraalkiisa ku sheegay inuu ku baaqayo in la muujiyo dhexdhexaadnimo , isla markaana loo saaro arrintaa gudi madaxbanaan oo baadha sababta keentay dhacdadaa.
Qoraalka uu soo saaray Wakiilka Qaramada Midoobay Augustine P. Mahiga, ayaa ah mid aan wax badan kala socon dhacdadaa, isla markaana si badheedh ah isaga indhatiray xaqiiqda ka jirta Somaliland iyo qaabka nidaamka dawliga ah ee Somaliland iyo shuruucda u degsan, isagoo ka bixiyay arrintaa sawir khaldan oo muujinaya inay shacbiga Somaliland iyo ciidanka qaranka dagaal dhexmaray. Sidoo kale Mahinga wuxuu si cad ugu gefay oo weedhahaa qoraalkiisa ku inkiray gebei ahaanba shuruucda dalka Somaliland, iyadoo dhawaaqiisu u muuqdo mid si badheedh ah ugu dhiirigelinaya Somaliland inay la mid nqoto Somaaliyada uu Madaxweynaha ka yahay ee ay qaramada midoobay ka abuuraan fawdada iyo xasiloonidarada.
Balse Mahinga oo ah Adoon aan waxba kala socon dhaqanka Bulshada Somaliland, isla markaana ay iskaga khaldan yihiin Somaliland iyo Somalia, waxa marar baddan farta ku fiiqay saxaafada Somaliland oo iftiimisay nacaybka uu u qabo Somaliland iyo sida uu uga xunyahay jiritaanka qaranimada, horumarka iyo nabadgelyada Somaliland. laakiin waxa la sugayaa jawaabta ay Madaxweyne Siilaanyo iyo xukuumadiisu ka bixiso gefka iyo meel ka dhaca Mahinga.